नेकपा राशिफल अमेरिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली काँग्रेस चितवन केपी शर्मा ओली मृत्यु प्रधानमन्त्री भारत नेपाल प्रहरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रचण्ड पक्राउ सरकार
राशिफल लोकसेवा विचित्र संसार हेल्थ टिप्स
पहिलोपटक विदेश भ्रमण गर्नेहरुका लागि ३८ टिप्स्
लाेकपाटी न्यूज २२ भाद्र २०७६, आईतवार ११:४० 0
काठमाडाै‌ं। नयाँ ठाउँ, नचिनेका मानिस, नजानेको भाषा, विदेश भ्रमण सजिलो पक्कै छैन। त्यसैले विदेश भ्रमण गर्दा आफन्त र साथीभाइलाई राम्ररी गाइड नगर्दा धेरै दुख पाएको घटनाहरू सुन्नमा आउँछ। सबैले जानेको बुझेको सामान्य लाग्ने यी कुराहरू नबुझाउँदा…
थोरै जमिनमा धेरे बाली उब्जाउने तरिका
लाेकपाटी न्यूज १७ भाद्र २०७६, मंगलवार १३:५७ 0
काठमाडौं। तपाईसँग थोरै जमिन छ। अथवा जमिन नभएर वरण्डा, छत तथा कौसीमा खेती गरिरहनु भएको छ। थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ। अर्थात् अहिले तपाइले लिइरहेको उब्जनीभन्दा धेरै हुनसक्छ। तर कसरी? यसका लागि एकै ठाउँमा मिश्रित बाली लगाउन…
लाेकपाटी न्यूज १५ भाद्र २०७६, आईतवार १६:१३ 0
आज विश्वमा करीव २५ संघीय देशहरू छन्, जसले विश्वको जनसंख्याको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ। तीमध्ये केही ठूला र सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक देशहरु छन्, जसमा भारत, अमेरिका, ब्राजिल, जर्मनी र मेक्सिको आदि पर्दछन्। तर, ती देशको सङ्घीय प्रणाली…
मानिस कुन उमेरमा पुगेपछि वयश्क हुन्छ ?
लाेकपाटी न्यूज १५ भाद्र २०७६, आईतवार ०८:२८ 0
बीबीसी । बीसको उमेरमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि अधिकांशले ‘अझै ठूलो भएको छैन’ भन्ने भनाइ सुन्नु परिरहेको हुन्छ। यसरी वैज्ञानिकहरुले पहिलोपटक किन २० कटिसकेपछि पनि मानिसहरुको व्यवहार वयश्कसँग मेल खाँदैन भन्नेबारे स्पष्टिकरण दिएका हुन्। मस्तिष्क…